ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးနှင့်အခမ်းနားဆုံး ငါးပြတိုက်ကြီး (၅) ခု by popolay.com
21 May 2020 20,710 Views
သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ ငါးပြတိုက်ကိုသွားလည်ရတာ ကြိုက်တဲ့လူတွေရှိလာ
စာရေးသူတို့ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ရန်ကုန်ငါးပြတိုက်ကြီးကို မကြာခဏသွားလည်ခဲ့ပြီး သွားတိုင်းလည်းအရမ်းပျော်ရွှင်ခဲ့ပါတယ်။ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကတော့ ယခုအချိန်မှာဖွင့်လှစ်ပြသခြင်း မရှိတော့ပါ။
ဒါပေမဲ့ ကန်တော်ကြီးဥယျာဉ်ထဲမှာ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီငါးပြတိုက်ကြီးတစ်ခုကိုတည်ဆောက်နေပြီဟုနိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဘယ်တော့လောက်ဖွင့်လှစ်ပြသမှာလည်းဆိုတာကတော့ ရင်ခုန်စွာနဲ့စောင့်ကြည့် ရမှာပါ။
ဒီနေ့ ငါးပြတိုက်ကိုသွားလည်ရတာကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးနှင့်အခမ်းနားဆုံး ငါးပြတိုက်ကြီး (၅) ခုကို ဖော်ပြချင်ပါတယ်။ ကိုဗစ်ပြီးလို့အခွင့်အခါကြုံရင် သွားလည်ကြစို့နော်။
၁. Chimelong Ocean Kingdom
Chimelong Ocean Kingdom ငါးပြတိုက် သည် တရုတ်နိုင်ငံ ကျူးဟိုင်ပြည်နယ် ဟန်ကျင်းကျွန်း‌ ပေါ်မှာတည်ရှိသော Chimelong အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဏ္ဏာဝါဥယျာဉ်အပန်းဖြေစခန်းထဲတွင်တည်ရှိပါတယ်။
သိသာထင်ရှားစွာမြင်တွေ့နိုင်သော ၆၃ မီတာ အမြင့်ရှိသည့် ဝေလငါးမန်း ရုပ်ထုကိုပြတိုက်အဝင်ဝမှာထားရှိ
ဤ Chimelong Ocean Kingdom ငါးပြတိုက် တွင် အနည်းဆုံး ဝေလငါးမန်း ၅ ကောင်ရှိပြီး အခြားငါးမျိုးစိတ်များစွာ ငါးလိပ်ကျောက်၊ ငါးမန်း များနှင့် သန္တာကျောက်တန်းအမျိုးမျိုးကို ထားရှိပြသ ထားပါတယ်။
ဝေလငါးမန်း လေးကောင်ကို လာရောက်လည်ပတ်သူများနှင့်အတူတွေ့ရစဉ်
ရေဂါလံ ၂၂.၇ သန်းဆံ့ ငါးကန်ကြီးတစ်ခုပါရှိသည့် Chimelong Ocean Kingdom ငါးပြတိုက် သည် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးနှင့်အခမ်းနားဆုံးငါးပြတိုက် အဖြစ် ဂရင်းနစ်မှတ်တမ်း ဝင်ခဲ့ပါတယ်။
Chimelong Ocean Kingdom ငါးပြတိုက် ကို မကာအိုမှ ဘတ်စ်ကား သို့ အဌားကားဖြင့် သွားနိုင်ပြီး မိနစ် ၃၀ ကြာမြင့်ပါတယ်။ ဟောင်ကောင်ကနေသွားမယ်ဆိုရင်တော့ ၂ နာရီ ကြာမြင့်မှာပါ။
ဝင်ကြေးအနေဖြင့် လူကြီးတစ်ဦးလျှင် ၃၅၀ယွမ် သို့ ၄၆ ယူရို ကျသင့်ပါတယ်။
၂. Georgia Aquarium
အမေရိကန်နိုင်ငံ ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ် အတ္တလန်တာမြို့တွင် တည်ရှိသော ဂျော်ဂျီယာငါးပြတိုက် သည် အနောက်နိုင်ငံများအနက် အကြီးဆုံးနှင့်အခမ်းနားဆုံးငါးပြတိုက် ဖြစ်ပြီး အာရှတိုက်၏အပြင်ဘက်တွင် ဝေလငါးမန်း ကိုထားရှိသည့်တစ်ခုတည်းသောငါးပြတိုက်ဖြစ်ပါတယ်။
အခြား ငါးမျိုးစိတ်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုလည်းထားရှိပြသထားပြီး ဘယ်လူးဂဝေလငါး၊ ဘော်တယ်နိုစ်လင်းပိုင် နှင့် ငါးလိပ်ကျောက်များသည် ဤငါးပြတိုက်၏အထင်ကရငါးမျိုးစိတ်များအဖြစ် ရှိနေပါတယ်။
ရေနေသတ္တဝါများကိုအမျိုးအစားလိုက် (၅) နေရာခွဲ၍ ပြသထားပါတယ်။ ၎င်းတို့မှာ Tropical Diver, Ocean Voyager, Cold Water Quest, River Scout နှင့် Dolphin Tales တို့ဘဲဖြစ်ကြပါတယ်။
ဝင်ကြေးအနေဖြင့် လူကြီးတစ်ဦးလျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၅.၉၅ ကျသင့်ပါတယ်။
၃. S.E.A. Aquarium
စင်ကာပူနိုင်ငံ စန်တိုဆာကျွန်း ပေါ်တွင် တည်ရှိသည့် S.E.A. Aquarium (South East Asia Aquarium) ငါးပြတိုက် သည် ကမ္ဘာပေါ်၌ရှိသော ငါးလိပ်ကျောက် အမျိုးအစားများစွာကို ထည့်သွင်းမွေးမြူပြသထားပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံ Chimelong Ocean Kingdom ငါးပြတိုက် မပေါ်လာသေးခင် ၂၀၁၄ အထိတော့ ဤ S.E.A ငါးပြတိုက်သည် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ငါးပြတိုက် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
S.E.A ငါးပြတိုက်တွင် Southeast Asia မှစ၍ Open Ocean အထိ လာရောက်လည်ပတ်သူများအတွက် ဇုံ ၁၀ ခု နှင့် ရေနေသတ္တဝါအမျိုးမျိုးတို့နေထိုင်ရာနေရာ ၄၉ နေရာပါရှိပါတယ်။ Open Ocean ငါးကန်သည် အလယ်တွင်တည်ရှိပြီး ရေနေသတ္တဝါပေါင်း ၅၀၀၀၀ ကျော်ကိုထည့်သွင်းမွေးမြူ ထားပါတယ်။
Shark Seas ငါးကန်မှာတော့ ငါးမန်းအမျိုးအစားပေါင်း ၂၀၀ ကျော်ကို ထည့်သွင်းပြသထားပြီး မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်သွားနိုင်သည့်ငါးမန်းမျိုးစိတ်များဖြစ်သည့် တူပုံသဏ္ဌာန် ငါးမန်း နှင့် ရန်လိုနေသော ငွေရောင် ငါးမန်း များ ပါဝင်ပါတယ်။
ဝင်ကြေးအနေဖြင့် လူကြီးတစ်ဦးလျှင် စင်ကာပူဒေါ်လာ ၃၄ ဒေါ်လာ ကျသင့်ပါတယ်။
၄. Churaumi Aquarium
ဂျပန်နိုင်ငံ အိုကီနာဝါကျွန်း မိုတိုဘူမြို့တွင်တည်ရှိသည့် Churaumi ငါးပြတိုက်သည် ဂျပန်နိုင်ငံ ၏အကြီးဆုံးငါးပြတိုက် ဖြစ်ပါတယ်။
Churaumi ငါးပြတိုက်အတွင်းတွင်ရှိသော ကူယိုရှိယိုငါးကန်သည် ယခုလောလောဆယ်မှာတော့ ဝေလငါးမန်း ၂ ကောင်နှင့်အတူ ငါးလိပ်ကျောက်များစွာ နှင့် အခြားငါးမျိုးစိတ်များစွာ ထည့်သွင်းပြသထားပါတယ်။
ကူယိုရှိယိုငါးကန်အပြင် ကျားငါးမန်း၊ ကျွဲငါးမန်းများနှင့် အလင်းရောင်လွှတ်သည့်ငါးများကို ထည့်သွင်းမွေးမြူထား အခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့်ငါးကန်များလည်း ရှိပါတယ်။
ဝင်ကြေးအနေဖြင့် လူကြီးတစ်ဦးလျှင် ဂျပန်ယမ်း ၁၈၅၀ သို့ ၁၅ ယူရို ကျသင့်ပါတယ်။
၅. Cube Oceanarium
Cube Oceanarium ငါးပြတိုက်ကိုတော့ တရုတ်နိုင်ငံ ချန်ဒူးမြို့ နယူးစန်ချူရီဂလိုဘယ်စင်တာ(New Century Global Center) ထဲတွင် တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ ပိုပြီးအတိအကျပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Seaside City shopping mall ထဲမှာတည်ရှိတာပါ။
ရေငန်သတ္တဝါပေါင်း ၃၃၀၀၀ ကျော် နှင့် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဂျယ်လီငါး များကို ထည့်သွင်းမွေးမြူပြသထားပါတယ်။ အဓိကငါးကန်မှာတော့ ဝေလငါးမန်းအသေးလေးနှစ်ကောင် နှင့်အတူ အခြားငါးမျိုးစိတ်များစွာကို ထည့်သွင်းမွေးမြူ ထားပါတယ်။
နာမည်ကြီးရသည့်အကြောင်းအရင်းမှာ ၃၉.၆၅ မီတာ အကျယ် ရှိပြီး ၈.၃ မီတာ အမြင့် ရှိသည့် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး မှန်ကန်ကြီး အဖြစ် ဂရင်းနစ် စံချိန် ဝင်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ပစီဖိတ် မှစ၍ အမေဇုန်၊ အာတိတ်မြောက်ပိုင်းထိ အပူပိုင်း နှင့် အအေးပိုင်းနေ ရေနေသတ္တဝါမျိုးစုံ ကို ရေလီတာ ၁၀ သန်းဆံ့ ငါးကန်ကြီးထဲတွင်ထည့်သွင်းမွေးမြူပြသထားပါတယ်။
ဝင်ကြေးအနေဖြင့် လူကြီးတစ်ဦးလျှင် ၁၃၀ ယွမ် သို့ ၁၈ ယူရို ကျသင့်ပါတယ်။